Zava-misy Dimy Momba Ny Día de Los Muertos (Andron’ny Maty) Ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 16:32 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Català, русский, македонски, Español, 日本語, Ελληνικά, English
Alitara nataon'ireo mpianatra tao amin'ny Kolejin'ny Tanànan'i San Francisco. Sary an'i Lupita Peimbert.
Mankalaza ny 2 Novambra ho toy ny Andron'ny Maty (Día de los Muertos) ny olona rehetra manerana an'i Etazonia, fety Meksikàna hanomezana voninahitra ireo efa nodimandry ary mahatonga ny fahafatesana ho zavatra iray hosaintsainina amin'ny fomba hafa.
Nambabo an-dry zareo Amerikàna ny endrika tsara tarehy isaloran'ity fombandrazana ity — karandoha nohaingoina, voninkazo, alitara tsara voatra — lasa iray amin'ireo fitafy tena malaza indrindra mandritry ny Halloween. Na ny kolontsaina ‘pop’ aza dia nàka ihany koa ity fety ity ho aminà lahatsary tahàka ny “The Book of Life” (Ny Bokin'ny Fiainana) nosoratan'ilay Meksikàna mpamokatra sarimihetsika, Guillermo del Toro, sy ny “Coco“, vokatra iray hivoaka tsy ho ela avy amin'ny studio Pixar.
Nampidirin'ireo orinasa isankarazany liana amin'ny tsena Hispanika any Etazonia ho ao anatin'ny ezaka fanatonana ny mpanjifa sy ny tetikadim-barotr'izy ireo ny fankalazàna ny 2 Novambra. Ohatra, noravahan'ilay vondrona toeram-pivarotana Trader Joe's taminà calaveritas (karandoha nohaingoina) ny sasantsasany tamin'ireo toeram-pivarotany, ary nivarotra voninkazo zempazuchitl (marigolds) ry zareo, ankoatry ny vokatra hafa.
andron'ny divay maty! Ao amin'ny Trader Joe's
Ny soratsoratry ny Google ho an'ilay andro dia natao taminà papel picado, haingo mampiavaka manokana ny fety Meksikàna.
Mankalaza ny Andron'ny Maty amin'ny alàlan'ny soratsoratra tena Meksikàna ny Google
Ho an'ny fandraharahàna, vondrom-piarahamonina, kolontsaina ankapobeny, na ho an'ny tena manokana, ireto ireo zava-misy dimy mikasika ity fety fankalazan'ny Meksikàna ity.
1. Ny 2 Novambra no Andron'ny Maty.
Tsy aloha tsy aoriana.
2. Fombandrazana manana ny lanjany io ao Meksika.
Nitombo tao anatin'ny fitondràna voninkazo, sakafo ary zavapisotro mankeny am-pasana izahay, mba hanome voninahitra ireo havanay nodimandry. Ao anatiny foana ny fisotroana. Mba marina.
3. Mankalaza ihany koa i Amerika Afovoany, mihoatra na latsaka kely.
Saingy firenena vitsy ao Amerika Atsimo ihany no manao azy.
4. Safatsiroa ny fankalazàna ao San Francisco.
Tany amin'ny taona 1970 tany ho any, neken'ny Misiona ao amin'ny Distrikan'i San Francisco (toerana ahitàna betsaka indrindra ny vondrom-piarahamonin'ireo Meksikàna ao an-tanàna) ilay fombandrazana, tamin'ny fampidiràna azy io sy namadihana azy nandritry ny taona nifandimby ho lasa fifangaroana filaharana manana endrika ‘jazzy’ fanao any Nouvelle-Orleans miaraka amin'ny fitafy sy endrika nolokoina, ary ireo tsodrano atao amin'ny fombafomba sy mpandihy azteka.
5. Manome fomba fijery hafa ny atao hoe fahafatesana io.
Miaraka amin'ity fety Latino-Meksikàna ity, mianatra ny tsy hatahotra ny fahafatesana sy ny maty ny olona, fa milalao miaraka amin'ireo fotokevitra sy hehy mikasika ny maha-nofo aman-drà antsika.